Accueil > Gazetin'ny nosy > Dr Joseph Randriamiarisoa: “Olona mpandainga i Henry Rabary-Njaka”
Dr Joseph Randriamiarisoa: “Olona mpandainga i Henry Rabary-Njaka”
Nitondra tsikera mafy ho an’ny fitondrana mijoro eto amin’ny firenena ny minisitry ny tontolo iainana teo aloha, ny dokotera Joseph Randriamiarisoa. Tahaka ny fomba fahitan’ny mpanara-baovao rehetra dia mahita ity mpanao politika ity fa tsy misy mandeha amin’ny laonina intsony ny fomba hitantanana ity firenena malagasy ity, amin’izao fitondran-dRajaonarimampianina izao. Naneho ny heviny mikasika ny resaka nataon’ny minisitry ny raharaham-bahiny tao amin’ny televizionina frantsay TV5, tamin’ny zoma lasa teo i Joseph Randriamiarisoa, ary nilaza fa olona tsy matotra sy mpandainga ingahy Henry Rabary-Njaka. “Ahoana no afahan’ny minisitra Rabary-Njaka milaza fa misy fandrosoana eto Madagasikara kanefa ny Malagasy rehetra dia samy mahita fa mitotongana ny firenena? Hita mibaribary ankehitriny fa miha mahantra ny vahoaka Malagasy, mirongatra izay tsy izy ny tsy fandriampahalemana ary tsy mitsahatra misondrotra ny vidim-piainana. Tsy misy zavatra mandeha araka ny tokony ho izy intsony eto amin’ity firenena ity noho ny tsy fahaiza-mitantan’ireo mpitondra ankehitriny. Amiko dia olona tsy tompon’andraikitra na “irresponsable”, ary olona mpandainga i Henry Rabary-Njaka” , hoy ny Dr Joseph Randriamiarisoa. Raha ny mikasika ny fanapahan-kevitra noraisin’ny governemanta amin’ny fananganana ilay “Task force” izay nambara fa hiady amin’ireo olona iainan’ny mponina amin’ny andavan’andro, dia nilaza ity minisitra teo aloha ity fa tsy ny fananganana izany velively akory no hamaha olana fa ny fomba fitantanana amin’ny ankapobeany mihintsy no tokony hasiana fanovana lehibe.
Ambatofinandrahana: Fanafihan-dahalo efatra tao anatin’ny iray andro
Tamin’ny zoma faha 02 martsa 2018 lasa teo dia fanafihan-dahalo mahatsiravina no nitranga tao amin’ny tanànan’Ambatofinandrhana. Nisy olona roa no maty tamin’izany ary am-polony no naratra.
Ny zoma tamin’ny 4 ora tolakandro dia mpandraharaha iray antsoina hoe Ratoto izay avy any Imady Ambositra no maty tao amin’ny làlan’Ambalamahatsara raha avy nividy vokatra tany amin’ity toerana ity. Maty vokatry ny tifitra variraraka nahazo azy ity raimpianakaviana ity. Ny iray izay niaraka taminy dia mbola miady aina ao amin’ny hopitaly ao Ambatofinandrahana amin’izao fotoana izao. Nandeha môtô tany amin’ity toerana ity izy roalahy ireto hividy vary. Amin’izao fotoana izao dia 800ariary monja ny vidin’ny vary iray kilao any amin’ity toerana ity. Rehefa niverina hody aty Ambatofinandrahana izy roalahy ireto no nosakan’ny dahalo enin-dahy teny an-dàlana ka izao maty izao ny iray.
Ny alin’io zoma 02 martsa 2018 io ihany dia notafihin’ny dahalo koa ny mpandrafitra iray tao amin’ny tanàna antsoina hoe Antsinanan’i Vazaha tamin’ny 12 ora alina. Poa-basy variraraka no nitranga tamin’izany. Tsy nisy nahasahy nivoaka sy nanohitra ny olona tao amin’ny manodidina na dia tao an-tanànan’Ambatofinandrahana renivohitra no nitranga ny fanafihana. Dahalo maro koa no nanafika ity mpandrafitra ity. Lasany avokoa ny vola sy ny entana saro-bidy tao an-trano. Naratra mafy noho izany ny olona tao an-trano rehetra ary mbola tsaboina ao amin’ny hopitaly koa izy ireo amin’izao fotoana izao. Marihina fa miala 100 metatra ny toerana niandrasana ny fatin’ilay Ratoto ity fanafihana faharoa ity.
Ny alin’ny zoma ihany dia notafihin’ny dahalo koa ny tanàna antsoina hoe Tsarasaotra ao Tatamo izay miala 5 km ny renivohitra. Tamin’ny 12 ora alina. Raikitra ny ady ka nahafaty dahalo iray ny fokonolona. Tsy azon’ireo dahalo koa ny omby nokasainy hangalarina.
Ny sabotsy faha 03 martsa 2018 indray nefa dia fiarakodia mampitohy an’Ambatofinandrahana sy Ambositra no notafihin’ny dahalo koa. Mbola tamin’ny 11 ora atondro no nitranga ity fanafihana ity. Miala 8 km monja ny tanànan’Ambatofinandrahana no nitrangan’izany. Nosakan’izy ireo vato sy hazo ny lalàna teo Ibodana izay nisian’ny fanafihana. Tifitra variraraka no nahazo ny olona sy ilay fiara ka nisy olona ampolony koa no naratra.
Nanomboka miverina indray ny fanafihana mahery vaika ataon’ny dahalo any Ambatofinandrahana ankehitriny. Mandeha dia mandeha ny resaka fa hoesorina tao ilay zandary lehiben’ny kaompania ao Ambatofinandrahana fa hosoloina izay zandary avy any Tsiroanomandidy izany indray hono. Manomboka nahazo aina ny dahalo raha naheno izany ka izao efa miverina manao fanafihana mafimafy izao indray.
Nikorontana tanteraka indray ny mponina aty Ambatofinandrahana amin’izao fotoana izao. Tsy mbola milamina ny asan-dahalo. Miparitaka izay tsy izy ny basy mahery vaika. Mandeha andiany hatrany amin’ny 60 ka hatramin’ny 100 ireo dahalo toa ny nitranga tany Ambondromisotra tamin’ny volana febroary 2018 lasa teo iny. Tena mandry andriran-dratsy ny mponina aty Ambatofinandrahana. Efa tsy hay tenenina intsony ny isan’ny olona maty isan-kerinandro.